ကေလးေတြကို ေအာက္ပါအက်င့္ဆိုး သံုးခု ကို ေဖ်ာက္ေပးပါ ..! - APANNPYAY
Home / ဗဟုသုတအစံု / ကေလးေတြကို ေအာက္ပါအက်င့္ဆိုး သံုးခု ကို ေဖ်ာက္ေပးပါ ..!
ကေလးေတြကို ေအာက္ပါအက်င့္ဆိုး သံုးခု ကို ေဖ်ာက္ေပးပါ ..!
Apann Pyay 11:54 PM ဗဟုသုတအစံု Edit
အခ်စ္လြန္ေတာ့ အႏွစ္ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ကေလးမ်ားဟာ အရြယ္ႀကီးလာတဲ့အထိ အစစ အရာရာ လူႀကီးကို အားကိုးတႀကီး ဆက္ျဖစ္ေနတာမ်ဳိးကို ဆိုလိုတာပါ။ ျပသနာေသးေသးေလးကအစ ေျဖရွင္းဖို႔ မစဥ္းစားဘူး၊ ဦးေနာက္သံုးဖို႔ ေလးဖ်င္းေနတတ္တယ္။ လူႀကီးကို အားကိုးလြန္တဲ့ကေလးဟာ စိတ္ဓါတ္ပိုမို ေပ်ာ့ညံ့ တတ္ပါတယ္။ အႀကံေပးခ်င္တာကေတာ့ ေန႔စဥ္ ျပဳလုပ္ရတဲ့ ကိစၥ အခ်ဳိ႔မွာ မိဘမ်ားအေနနဲ႔ ကေလးကို မ်ားမ်ား လုပ္မေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ ဥပမာ ကေလးကိုယ့္ကိုကို ထမင္းစားခိုင္းတာမ်ုိဳး၊ ပန္းကန္သိမ္းခိုင္းတာမ်ုိဳး။ ၿပီးရင္ ကေလးကို ေမးခြန္းမ်ားမ်ားေမးပါ။ ကေလးကို မ်ားမ်ားစဥ္းစား ဖို႔ေလ့က်င့္ေပးတဲ့သေဘာပါ။ ကေလး မိမိဖာသာ မိမိျပသနာကို ေျဖရွင္းတတ္ေအာင္ အားေပးအားေျမာက္ျပဳပါ။ တျဖည္းျဖည္း မိမိကိုယ္မိမိ ယံုၾကည္မူ တိုးပြားလာပါလိမ့္မည္။
အချစ်လွန်တော့ အနှစ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကလေးများဟာ အရွယ်ကြီးလာတဲ့အထိ အစစ အရာရာ လူကြီးကို အားကိုးတကြီး ဆက်ဖြစ်နေတာမျိုးကို ဆိုလိုတာပါ။ ပြသနာသေးသေးလေးကအစ ဖြေရှင်းဖို့ မစဉ်းစားဘူး၊ ဦးနောက်သုံးဖို့ လေးဖျင်းနေတတ်တယ်။ လူကြီးကို အားကိုးလွန်တဲ့ကလေးဟာ စိတ်ဓါတ်ပိုမို ပျော့ညံ့ တတ်ပါတယ်။ အကြံပေးချင်တာကတော့ နေ့စဉ် ပြုလုပ်ရတဲ့ ကိစ္စ အချို့မှာ မိဘများအနေနဲ့ ကလေးကို များများ လုပ်မပေးဖို့ လိုပါတယ်။ ဥပမာ ကလေးကိုယ့်ကိုကို ထမင်းစားခိုင်းတာမျိုး၊ ပန်းကန်သိမ်းခိုင်းတာမျိုး။ ပြီးရင် ကလေးကို မေးခွန်းများများမေးပါ။ ကလေးကို များများစဉ်းစား ဖို့လေ့ကျင့်ပေးတဲ့သဘောပါ။ ကလေး မိမိဖာသာ မိမိပြသနာကို ဖြေရှင်းတတ်အောင် အားပေးအားမြောက်ပြုပါ။ တဖြည်းဖြည်း မိမိကိုယ်မိမိ ယုံကြည်မူ တိုးပွားလာပါလိမ့်မည်။
၂။ လိုချင်တာ မရရင် ချက်ချင်း ဒေါသဖြစ်ခြင်း၊ စိတ်ကောက်ခြင်း၊ လူရိုက်တဲ့အထိ ဖြစ်လာခြင်း၊
မိဘများအနေနဲ့ အလိုလိုက်သင့်မှလိုက်ပါ။ ကလေးများ စောင့်ဆိုင်းတတ်တဲ့ အကျင်း မွေးပေးပါ။ အခြားသူများရဲ့ ခံစားချက်ကို လည်း ကိုယ်ချင်းစာ စဉ်းစားတတ်ပါစေ။ ကိုယ့်စိတ်လုပ်ရှားမူကို ကိုယ်ထိန်းသိမ်းတတ်အောင် လေ့ကျင့်ပေးပါ။
၃။ ဘာပဲလုပ်လုပ် စိတ်ပါဝင်စားမူ နည်းခြင်း၊ အစမရှိ အဆုံးလည်းမရှိ ဖြစ်တတ်ခြင်း
အာရုံများလွန်းတဲ့ ကလေးမျာကို ဆိုလိုတာပါ။ အဲဒီ အာရုံများလွန်းတဲ့ အကျင့်ကို ငယ်ငယ်ကတဲက ဖျောက်ထားပေးမှ အဆင်ပြေမှာပါ။ ဘာပဲလုပ်လုပ်၊ ဘာပဲစော့စော့ သေသေချာချာ စခိုင်းပြီး ပြီးမြောက်သွားအောင်လုပ်ပါစေ။ ပြီးမှ နောက်တစ်ခု ပြောင်းခွင့်ပြုပါ။ ဥပမာ ပုံဆေးချယ်တယ်ဆိုပါဆို့ ၊ ဆေးချယ်တဲ့ ပုံ ပြီးဆုံးသွားမှ အရုပ်ပေးဆော့ပါ။ အရုပ်ကို ဆော့ပြီးမှ တီဗွီပေးကြည့်ပါ။ တစ်ပြိုင်တည်း လုပ်ခွင့်မပေးပါနှင့်။ ဘာပဲလုပ်လုပ် အာရုံစိုက်စေတဲ့သဘောပါ။